चन्द्रमामा घर बनाउने तयारी तीव्रः इँट्टा बनाउन थालियो - News Portal from Nepal
चन्द्रमामा घर बनाउने तयारी तीव्रः इँट्टा बनाउन थालियो
अन्तरिक्षमा दिनानुदिन बढ्दै गएको मान्छेको पँहुचले त्यहाँ बस्ती बसाउने सम्भावना धेरै टाढा नरहेको प्रतीत हुन्छ । अन्य विभिन्न ग्रह तथा उपग्रहमा मानव बस्ती बसाउने सम्भावनाको ठोस पूर्वाधार नबनेको भएपनि चन्द्रमामा मानव बस्ती बसाउने सपना अब धेरै टाढा छैन । त्यसका लागि मानिसहरूले चन्द्रमामै जमिनसमेत किन्न थालेका छन् ।
तर, मान्छेले चन्द्रमामा बस्ती बसाउन देखेको सपनाले धेरै जिज्ञासाहरू सृजना गर्दछ । जस्तोकि चन्द्रमामा घर बनाउन के–कस्ता साधन स्रोतको आवश्यकता पर्ला ? हामीले पृथ्वीमा प्रयोग गरिरहेको जस्तै इँट्टा, सिमेन्टले काम चल्छ वा विशेष प्रकारका इँट्टा तथा अन्य सामग्रीको आवश्यकता पर्ला ? यी प्रश्नको जवाफमा वैज्ञानिकहरू भन्छन्ः कुनैपनि ग्रहमा बस्ती बसाउनका लागि सोही ग्रहका कच्चा पदार्थ तथा खनिजहरूको प्रयोग गर्नु उचित र वातानुकुलित हुन्छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ साइन्सेज तथा इसरोले चन्द्रमामा घर बनाउन आवश्यक पर्ने विशेष किसिमको इँट्टा ‘स्पेस ब्रिक’ तयार पारेको बताइएको छ । जसको प्रयोगले चन्द्रमामा जुनसुकै किसिमको भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकिने जनाइएको छ ।
यसको निर्माणको लागि भारतीय वैज्ञानिकहरूले लुनर सोइल सिमूलेन्टको (चन्द्रमा पाइनेजस्तै माटो) को प्रयोग गरिएको बताइएको छ । सो माटो भारतीय अन्तरिक्ष अध्ययन संस्थान इसरोले तयार पारेको हो । लगातार ४ वर्षको अथक मिहेनतपछि बनाइएको इसरोले बताएको छ ।
सो माटोबाट निर्मित इँट्टा मजबुद तथा टिकाउ हुने बताइएको छ । यद्यपि यसको प्रभावकारिता बृद्धिको सम्भावना अझै छ, रिपोर्टहरूमा भनिएको छ । अन्तरिक्ष विज्ञानसँग सम्बन्धित अरू देशहरूले समेत यसप्रकारको इँट्टाको निर्माण गरिसकेका छन् ।
कोरोना संक्रमित २ हजार नयाँ बिरामी, १६ सयको मृत्यु